गाउँपालिकाको अनियमितता छानबिन गर्दै अख्तियार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
विनियोजित बजेट कामै नगरी हिनामिनाको गरेको आरोपमा उजुरी
माघ १३, २०७८ कुम्भराज राई
ओखलढुंगा — कार्यकालको पहिलो वर्षदेखि अनियमितताको विवादमा मुछिएको सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोसी गाउँपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । अनियमितताको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गाउँसभाबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम नगरी हिनामिना गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो । सबै वडामा गहुँ र कोदो चुट्ने मेसिन खरिद, कालिज पालन, कुखुरा पालन र वडा ६ को ठाने खोला खानेपानी आयोजनामा आर्थिक हिनामिना भएको उल्लेख छ । पालिकाको ७ वटा वडाका लागि गहुँ र कोदो चुट्ने एक/एक गरी १४ वटा मेसिन खरिद भएको थियो ।
उजुरी परेको विषयका सम्बन्धमा गत जेठ २७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बुलाई अख्तियारले पत्राचार गरेको थियो । आयोगको पत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस १६ मा माप्य दूधकोसी गाउँपालिकालाई कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भनेको छ । गहुँ, कोदो चुट्ने मेसिन खरिद गर्दा ३० हजार रुपैयाँमा खरिद गरी प्रत्येकको एक लाखका दरले बिल बनाई १४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । कालिज पालन गर्न भनी विनियोजित १० लाख बजेटबाट कुनै काम नगरेको उल्लेख छ ।
कुखुरा पालनका लागि विनियोजित बजेट ५ लाख रुपैयाँबाट सामान्य खालका चारवटा खोर मात्र निर्माण गरेको उजुरी परेको थियो । वडा ६ मा निर्माणाधीन ठाने खोला खानेपानी आयोजनामा गुणस्तरहीन र इस्टिमेटभन्दा फरक काम गरी करिब ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप छ । बुँदागत रूपमा दिइएको उजुरीअनुसार करिब ५९ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।
आयोगमा माप्य दूधकोसी गाउँपालिका, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बुका प्रतिनिधिसभा सदस्य हेमकुमार राई, प्रदेसभा ‘ख’का सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारी तथा १ नं. प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्मित माप्य–खुम्बु मितेरी पुलमा समेत अनियमितता भएको उजुरी परेको छ । करिब ९ करोड लागतमा निर्मित उक्त पुलमा करिब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
पुलको स्थलगत निरीक्षणका लागि आयोगको टोली हालै माप्य दूधकोसी पुगेर फर्किएको छ । २०७७ मंसिर ६ मा प्रदेश नं. १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त पुलको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनका क्रममा अनावश्यक रूपमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिएको थियो । कार्यक्रममै रिजर्भ गरिएको ४५ वटा गाडीको भाडासमेत भुक्तानी नगरेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । अन्य शीर्षकका उधारो रकमसमेत भुक्तानी नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १२:१२
काठमाडौँ — बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुन तोलामा ९ सय रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ९४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बिहीबार ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य ९३ हजार ९ सयबाट ९३ हजारमा झरेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँ घटेको छ । बुधबार तोलामा १३ सय रुपैयाँ रहेको चाँदी बिहीबार १२९० रुपैयाँ कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहीबार प्रतिऔंस सुनको मूल्य १८१२ अमेरिकी डलर हाराहारीमा छ ।